Iinkqubo zeBentley ziSungula ukuNikezelwa koLuntu lokuQala (i-IPO) -iGeofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Iinkqubo zeBentley ziSungula ukuNikezelwa koLuntu okuQala (IPO-IPO)
Geospatial - GISZobunjineliMicrostation-Bentley
I-Bentley Systems ibhengeze ukumiliselwa kokunikezelwa esidlangalaleni kwezabelo ezili-10,750,000 zezabelo zayo eziqhelekileyo zeBanga B. Izabelo eziqhelekileyo zeBanga B. Abanini zabelo abathengisayo balindele ukuba banike ababhalisi abaphantsi ekunikezeleni ukhetho lweentsuku ezingama-30 lokuthenga ukuya kuthi ga kwi-1.610.991 eyongezelelweyo izabelo zeCandelo B kwizabelo eziqhelekileyo kubanini zabelo abathengisayo. Ixabiso eliqikelelweyo lokubonelela esidlangalaleni liphakathi kwe- $ 17,00 kunye ne- $ 19,00 ngesabelo ngasinye. I-Bentley ifake isicelo sokudwelisa izabelo zayo kwi-NASDAQ Global Select Market phantsi kophawu "BSY."
IGoldman Sachs & Co LLC kunye neBofA Securities zisebenza njengabaphathi beencwadi abakhokelayo kunye neRBC Capital Markets zisebenza njengomphathi wencwadi kulomnikelo ucetywayo. I-Baird, iMarket Capital ye-KeyBanc kunye ne-Mizuho Securities zisebenza njengabaphathi babambisene nomnikelo ocetywayo. Izabelo zenkampani ziphakame ngama-52% kusuku lokuqala lokuthengisa. Izabelo zivulwe nge-28 yeedola ngoLwesithathu kwaye zavalwa kwindawo ephezulu yeedola ezingama-33,49 kwintengiso yaseNasdaq.
UGreg Bentley, uMongameli, i-CEO kunye noMongameli bathi, egameni lenkampani, uyonwabile ukuyifumana le nto ibalulekileyo. Uye wongeza ukuba bayathemba ukuba i-IPO izakubamba ingqalelo yeenjineli zasekuhlaleni kunye nolwakhiwo ezakha amanzi amdaka emhlabeni, isikhululo seenqwelomoya, uhola wendlela kunye neenkqubo zomoya.
I-Bentley ihleli iqinile njengenye yeenkokheli kwitekhnoloji yokwakha, ukubheja ngokudityaniswa kwetekhnoloji yolawulo lwedatha kwiiprojekthi zobunjineli kunye neeasethi. Yintoni ezise kukufumana iinkqubo zokuqinisekisa kunye nezisebenzayo apho zonke iintlobo zeempembelelo zichongwe kwangethuba. Esi sigqibo sokuya esidlangalaleni ayisiyonto intsha, kuba ngaphambili bebegcina le misebenzi besebenzisa iikhontrakthi zabucala, nangona kunjalo, phantse iminyaka engama-36 esi sibonelelo sivulwa ngokupheleleyo esidlangalaleni Nasdaq Global Khetha iMarike.
Kule minyaka ingama-36 sikhonze iinjineli ngesoftware yethu, sikholelwa ngamandla ukuba iziseko zophuhliso ezomeleleyo kunye nezomeleleyo zibalulekile ekuphuculeni umgangatho wobomi babantu kuyo yonke indawo, ukugcina okusingqongileyo kunye nokukhulisa uqoqosho lwethu. UGreg Bentley, u-CEO weeNkqubo zeBentley.
Akunakuphepheka ukuba ungazibuzi: Yintoni ukubaluleka kweli nyathelo kwihlabathi le-Geoengineering? Ngandlela thile iyakuguqula indlela ukuthengwa kwemveliso kunye nokucwangciswa kwemicimbi enxulumene nolwakhiwo okusingathwa ngayo, kodwa hayi okungcono, kodwa okungcono. Ukukhuthaza ukwenziwa kwezisombululo ezinxulumene necandelo leziseko zophuhliso (kokubini kwiinkonzo zoluntu, izakhiwo, ucwangciso lwedolophu okanye ulawulo lwamanzi), ukwandisa amandla kumjikelo wobomi bolwazi, ulwakhiwo nokusebenza kwezinto, oku kuphakanyiswa ngokudityaniswa kunye I-BIM kunye ne-DT (Amawele edijithali, amawele edijithali).
Umsebenzi wobuchwephesha bokungenelela kwezobuchwephesha kukungena kweli hlabathi litsha, elenze ngendlela enobundlobongela, lisebenzisa ubuchwephesha obenza uyilo, imodeli, uhlalutyo, ugcino, ulwakhiwo kunye nokubeka esweni idatha lula. Itekhnoloji nganye ekhoyo kwikhonkco le-AEC (Uyilo, ubuNjineli, uKwakha) ifuna ukudityaniswa ngokupheleleyo, i-DT kunye ne-BIM inokuba yeyona ndlela iphambili kulawulo lweziseko zophuhliso, kodwa icandelo lomhlaba akufuneki lishiywe bucala. Indibaniselwano ye-BIM + DT + GIS inamandla ngokwenene, kwaye sisiseko esiya kuhlala sixhaphakile kolu hlengahlengiso lweshishini lwe-4.
Kuthathwe kuwo Imagazini yeTwingeo uHlelo lwesi-5
I-Twingeo isungula uHlelo lwayo lwe-4